BBC Somali - Warar - Ciidanka NATO oo la weerarray
Ciidanka NATO oo la weerarray
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 24 Oktoobar, 2012, 18:47 GMT 21:47 SGA
Sawirkan waa doonta ay rasaasta is weydaarsadeen NATO oo dab uu qabsaday. Xigasho NATO
Hadal qoraal ah oo ay soo saareen ciidamada NATO ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa waxa ay ku sheegeen in saaka iyaga oo roondo sameynaya ay rasaas ku soo fireen waxa ay ku tilmaameen koox ay uga shakiyeen burcad badeed.
Markabka NATO ee rasaasta lagu furay oo HNMLS ROTTERDAM ayaa sitay calanka hawlgalka kan dhanka ah burcad badeedda ee NATO.
Markabka Rotterdam ee gaashaanbuurta NATO uu leeyahay ayaa weerarkani waxaa uu uga yimid markii uu ku dhowaadey doon ay ka shakiyeen meel ku dhow xeebta. Rasaasta ayaa markabka waxaa looga soo ridey doonta, taasina waxay keentey in ciidamada la dagaalanka burcadbeedka ee NATO ay iyaguna rasaas ku jawaabaan sida uu dhigato xeerka is difaaca marka la soo weeraro.
Wax yar kadib doonta ayaa waxaa qabsadey dab sida ku xusan war taliska ciidamada NATO uu ka soo saarey magaalada London. Raggii saarnaa ayaa kadib la arkayey iyagoo biyaha ku soo boodaya, iyadoo mid ka mid ah dadkii saarnaa doontaas lagu diley rasaasta la is weydaarsadey.
Ciidamada NATO ayaa badbaadiyey 25 qof oo doonta ka soo booday, kuwaas oo khatar ugu sugnaa inay biyaha qaadaan.
Taliye sare oo ka tirsan NATO, Ben Bekkering ayaa sheegey in markabka NATO iyo doomaha la socdey weerar lagu hayey xitaa intii ay ku guda jireen badbaadinta dadkii biyaha ku dhacay ee doonta saarnaa. Mid ka mid ah doomaha NATO ee hawlgalkaasi ku jirey ayaa waxyeelo ay soo gaartey.
Hawlgalka gaashaanbuurta NATO ee loo yaqaano Operation Ocean Shield, ama gaashaanka badweynta waxaa uu weyb ka yahay dadaalka caalamiga ah ee lagula dagaalamayo burcad badeedka Geeska Afrika ka hawlgala, waxaana uu dhaqan galey sannadkii 2009.